"Ary soraty eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao [izao teny andidiako anao anio izao] " — Deo. 6:9
Hatrizay hatrizay, ireo olona nahatoky teo amin'ny Isiraely dia nanome lanja manokana ny fanabeazana. Araka ny baikon'ny Tompo dia tokony hampianarina ny zaza, eny, na ny zaza menavava aza. Tokony hampianarina azy ireo ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahalehibeazany, indrindra araka izay ambara ao amin'ny lalàny sy aseho eo amin'ny tantaran'ny Isiraely. Amin'ny alalan'ny hira sy ny vavaka, ary ny lesona avy amin'ny Soratra Masina, izay ampifanarahana amin'ny sain'ny zaza vao manomboka mivelatra, no tokony hampianarin'ny ray aman-dreny ny zanany. Tokony hampianarin'izy ireo amin'ny alalan'izany ny zanany fa ny lalàn'Andriamanitra dia maneho ny toetrany, ary rehefa raisina ao am-po ny foto-kevitry ny lalàny, dia hita taratra eo amin'ny toe-tsaina sy ny toe-panahy ny endrik'Andriamanitra. — CG, 32
Zava-dehibe ho an'i Mosesy ny namorona feon-kira hitanisana ny didin'Andriamanitra, mba hahafahan'ny ankizy mianatra ny didy tsirairay nandritra ny dian'izy ireo tany an'efitra. Ary raha zava-dehibe taminy izany dia vao mainka zava-dehibe ho antsika ankehitriny koa ny hampianatra ny zanatsika ny Tenin'Andriamanitra ! — RH, 08 Septambra 1904
Ny tena fahasambarana eo amin'izao fiainana izao sy ny fiainan-koavy dia miankina amin'ny fampiharana ny hoe "Izao no lazain' i Jehovah" (...) Aoka i Kristy no ho môdely. Hanao ny fomba rehetra azo ampiasaina i Satana mba hanehoana izany tanjona ambony eo amin'ny fahamasinana izany ho toy ny henjan-doatra. Adidinao ny mampita amin'ny zanakao, dieny vao kely izy, ny fahamarinana fa nohariana araka ny endrik'Andriamanitra izy. Tonga teto amin'izao tontolo izao i Kristy mba hanome ohatra velona ny amin'ny tokony ho toetsika, ary ny ray aman-dreny izay` milaza fa mino ny fahamarinana ho an'izao vaninandro izao dia tokony hampianatra ny zanany ho tia an'Andriamanitra sy hankatô ny lalàny. Izany no adidy lehibe sy manan-danja indrindra tokony hataon'ny ray sy ny reny. — CG, 80,81
Tsy maintsy manomboka ao an-tokantrano ny fanavaozana ara-panahy lehibe indrindra. Ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra no tokony ho antony lehibe manosika ny asa, ny fitantanam-bola, ny fahitsiana, ary ny fifampiraharahana eo amin'ny olona samy olona. — CG, 489
Tsy vokatry ny kisendrasendra ny toetra ambony sy tsara ananan'ny olona. Vokatry ny famolavolana ny toetra hatramin'ny fahazazana izany, ary fampiharana ny lalàn'Andriamanitra ao an-tokantrano. — CG, 42